बिहे नगरी गर्भवती बन्न चाहाने यि युवतीको अनौठो इच्छा कसले पूरा गरिदेला ? – Gazabkonews
बिहे नगरी गर्भवती बन्न चाहाने यि युवतीको अनौठो इच्छा कसले पूरा गरिदेला ?
पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु । तर, म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न, न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । यसै कारणले मैले सेरोगेट मदर बन्ने निर्णय लिएँ, जसकारण प्रसुतीपछि मलाई बच्चा मसँगै राख्न नपरोस् । सेरोगेट आमा बन्ने विचार म २१ बर्ष हुँदा नै आएको थियो । म खाली गर्भवती हुनुको अनुभव लिन चाहान्छ् ।
म यति बुझ्न चाहान्छु, एउटा बच्चा मेरो शरीरभित्र कसरी विकसित हुन्छ र म उसलाई आफ्नो गर्भभित्र कसरी हुर्काउन सक्छु रु म आफ्नो शरीरमा आउने परिवर्तनलाई हेर्न चाहान्छु, महशुस गर्न चाहन्छु । मेरो छाला कसरी तन्किन्छ हेर्न चाहान्छु । म आफ्नो शरीरभित्र रहेको बच्चाको हलचललाई महशुस गर्न चाहान्छु ।
श्रीकृष्णका डुब्लिकेट प्रकाशले काठमाडौँ आए लगत्तै यि सुन्दरीसँग गरे विबाह, विबाहपछि पहिलो पटक मिडियामा, हेर्नुहोस् भिडियो
झट्ट हेर्दा स्व”र्गीय नायक श्री कृष्ण श्रेष्ठ जस्तै देखिने प्रकाश चन्द अहिले सामाजिक संजालमा निकै नै भाइ”रल छ्न। देखिनु मात्र कहाँ हो र उनले त अभिनय,कला पनि श्री कृष्ण श्रेष्ठ को जस्ताको त्यस्तै गर्ने गर्छन। श्री कृष्णले खेलेको फ्लिमका मन छुने भनाइहरु उनले जस्ताको तस्तै भन्न्ने गरेका छ्न ।
कंचनपुर जिल्ला बेलौरि नगरपालिका वडा नं ५ रामनगर मा एक सामान्य परिवार मा जन्मेका प्रकाश चन्द को कला देखे पछि गायक सम्राट चौलागाईंले एक अवसर दिनु पर्छ भनि आफ्नो गीतमा खेल्ने अवसर दिएका हुन।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अवसर पाए लगत्तै प्रकाशलाई माइक्रोलिङ्क मुभी मिडियाका प्रस्तोता भोजराज थापाले काठमाडौँ सम्म लैजाने व्यवस्था मिलाएका थिए ।त्यस पछि उनि म्युजिक भिडियोमा खेल्न खेलेका हुन । ‘तिम्रो काख मेरो लागि रुइको सिरानी ‘नामक गीतमा मोडेल गीता ढुंगानासंग अभिनय गरेका छन।
यो प्रकाशको पहिलो भिडियो भएको कारण एकदम राम्रो भएको छ भनी उनले भनेका छन। आइतबार १२ गते आइतबार दिउसो ४ बजे सम्राट चौलागाईंको अफिसियल युटुब च्यानल बाट सार्वजनिक भएको उक्त गीत अहिले निकै नै दर्शक श्रोतहरुले रुचाएका छ्न । अब प्रस्तुत छ प्रकाश चन्दले खेलेको पहिलो म्युजिक भिडियो ।